Online Hartha, Author at Online Hartha - Page 191 of 199
ဘယ်လို သစ္စာ ကတိတွေများတိုင်တည်ခဲ့ကြပါလိမ့်…
May 1, 2020 by Online Hartha
ဘယ်ဘဝကရေစက်တွေများလည်းနော်… မိုးကောင်းကျေးရွာ နာရေးအိမ်မှာ မနေ့က အအေးခေါင်းဆင်တော့ ခုံလေးမှာ ရီဝေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကြည့်နေတဲ့အဘ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူနောက်ကို ဒီမနက်အစောပဲ လိုက်သွားပြီတဲ့။ စိတ်လျှော့လိုက်တာများလား။ ဘယ်လို သစ္စာ ကတိတွေများတိုင်တည်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားသော အဘိုးနဲ့ အဖွား ကောင်းရာဘုံဘွရောက်ပါစေ အအေးခေါင်းနောက်တစ်လုံးဆင်ပေးရင်နဲ့ တွေးမိတဲ့အတွေးများပါ။ ဒေါ်တင်မြင့် ၇၃နှစ်၊ ဦးမြဝင်း ၇၅ နှစ်။လှမျိုးဝင်း.မြန်မာစာ mt unicode ဘယျဘဝကရစေကျတှမြေားလညျးနျော…. မိုးကောငျးကြေးရှာ နာရေးအိမျမှာ မနကေ့ အအေးခေါငျးဆငျတော့ ခုံလေးမှာ ရီဝတေဲ့မကျြလုံးအစုံနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့အဘ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဖွဈသူနောကျကို ဒီမနကျအစောပဲ လိုကျသှားပွီတဲ့။ စိတျလြှော့လိုကျတာမြားလား။ ဘယျလို သစ်စာ ကတိတှမြေားတိုငျတညျခဲ့ကွပါလိမျ့။ ဘ၀တစ်ပါးသို့ကူးပြောင်းသွားသော အဘိုးနဲ့ အဖွား ကောင်းရာဘုံဘွရောက်ပါစေ အအေးခေါငျးနောကျတဈလုံးဆငျပေးရငျနဲ့ တှေးမိတဲ့အတှေးမြားပါ။ ဒျေါတငျမွငျ့ ၇၃နှဈ၊ ဦးမွဝငျး ၇၅ နှဈ။လှမြိုးဝငျး.မွနျမာစာ mt
ဘူးသီးနုနုခူးစားလို့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော် အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဘိုးတော်
မလေးရှားနိုင် ငံက ဦးထန်ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ရှိတဲ့သူတယောက်က ကောင်မလေးတွေ ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ တွဲတဲ့နေရမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူပါ။ သူအိမ်နီးနားချင်း လူငယ်တွေဆို သူ့ကို သဘာကျကြတာပေါ့.. အသက်ကြီးနေပေမယ့် ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေဘဲ သူကတွဲနေတာကိုး ဒါေ ပမယ့် အခုသူနောက်ဆုံးထားတဲ့ သူရဲ့ကောင်မလေးလေးဟာ ရင်းဂစ် ၄ သိန်းကျော် ၊မြန်မာငွေနဲ့ဆို သိန်း ထောင့်တစ်ရာကျော် လိမ်လည်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြားယောင်းခဲ့ပြီး ရင်းဂစ် ၄ သိန်းကျော် ၊မြန်မာငွေ သိန်း တစ်ထောင်ကျော်လိမ်လည်သွားခဲ့တာပါ။ အဘိုးကြီးက သူအလိမ်ခံရတော့ ရဲတိုင်ပါတယ်။ ရဲတိုင်မှ ပိုဆိုးကုန်ပြီး သူ့ရဲ့ အမူ့ဟာလဲ မလေးရှား ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတဲ့သူတွေများအကြား နာမည်ကြီးလာပါတယ်… လူမူကွန်ယက်အသုံးပြုသူတစ်ချို့ကတေ့ာ အဖိုးကြီးကို ငွေလိမ်လည်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကို အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး တစ်ချို့သော လူမူကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေကတော့ နွားအိုမြက်နုကြိုက်တဲ့ အဖိုးကြီး အလိမ်ခံရတာတောင် နည်းသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်…။ unicode … Read more
Categories နိုင်ငံတကာသတင်း Leaveacomment
မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များပြာနေသည့်အတွက် ယနေ့မေလ (၁)ရက်နေ့ ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ… ရန်ကုန်၊ မေလ (၁)ရက် ကျပ်တစ်ထောင်တန် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲကို ဒီနေ့မေလ (၁) ရက်မှာ အပြီးဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ မေလ (၂) ရက်နေ့မှသာ ဆုမဲတွေကို ဆက်ရွေးချယ်နိုင်တော့မယ်လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ထီပေါက်စဉ်အများစုဟာ မရောင်းချရတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့် ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသဖြင့် ထီပေါက်စဉ် ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ “ထီတွေအများကြီးကျန်နေလို့ အကြာကြီးဖွင့်နေရတယ်။ လောလောဆယ် တစ်ရက်နဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူး။ ပေါက်ဂဏန်းက မရောင်းရတဲ့ထီတွေအများကြီးပါနေလို့ တစ်ရက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ (၂) ရက်လောက်ဖွင့်ရမယ်။” လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့်လွင်က ပြောပါတယ်။ credit unicode မရောငျးရတဲ့ ထီလကျမှတျမြား အလှနျမြားပွာနသေညျ့အတှကျ ယနမေ့လေ (၁)ရကျနေ့ … Read more
နောက် နာရီ (၆၀) အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ… (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) “ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ (နောက် ၆၀ နာရီအတွင်း) (၃.၅.၂၀၂၀) ရက်ခန့်တွင် မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်သည် ကနဦးတွင် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် မြောက်-အရှေ့ မြောက်ဘက်သို့ကွေ့ကာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည် ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။” မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန unicode နောကျ … Read more
Categories မိုးလေ၀သ သတင်း Leaveacomment
( ၇ )ရက်သားသမီးများ ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ကဆုန်လပြည့်နေ့ (6.5.2020)တွင်သာပြုလုပ်ရမယ့် ယတြာ
ကံပွင့် ကံမြှင့်စေရန် ကဆုန်လပြည့်နေ့ (6.5.2020)တွင်သာပြုလုပ်ရမယ့် ယတြာ နှင်းဆီပန်း(၅)ပွင့် သပြေပန်း(၅)ခက် လမုန့်(၅)ခုတို့အား လင်ဗန်းတစ်ချပ်ထဲတွင်လှပအောင်ပြင်ဆင်၍ထည့်ပြီး ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် |အမွေးတိုင်(၅)တိုင်|သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်စီကိုလည်း ဘုရားရှင်အားဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါ… အနန္တော အနန္တ ငါးပါးအား ရည်စူးကပ်လှူပူဇော်ရင်း အောက်ပါအတိုင်း လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းပေးပါ… `ဘုရားရှင်အမှူးရှိသော အနန္တငါးပါးအားရည်မှန်း၍ ရည်စူး၍ နှင်းဆီပန်း (၅)ပွင့်တိုဖြင့်လည်းကောင်း| သပြေပန်း(၅)ခက်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| လမုန့်(၅)ခုတို့ဖြင့်လည်းကောင်း| ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| အမွေးတိုင်(၅)တိုင်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း| ရေတော်(၅)ခွက်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ကပ်လှူပူဇော်ကန်တော့ပါ၏…။ ဤသစ္စာမှန်ကန်ပါက| ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လည်းကောင်း| ဤမှန်သောသစ္စာတန်ခိုးကြောင့်သော်လည်းကောင်း| အရပ်လေးမျက်နှာ| အရပ်ရှစ်မျက်နှာ| အရပ်ဆယ်မျက်နှာတို့မှ ငွေကြေး|စည်းစိမ်ဥစ္စာ| ရတနာများစွာတို့သည်လည်းကောင်း| စိန်ရွှေရတနာ| ကျောက်မျက်ရတနာများစွာတို့သည်လည်းကောင်း |အလုပ်အကိုင်| အကြံအစည်ကိစ္စများစွာတို့သည်လည်းကောင်း လျင်မြန်စွာတိုးတက်ဝင်ရောက် လာကြပါစေသတည်း လျင်မြန်စွာ ဝင်လာမစဲ |တသဲသဲ စည်ကားလာကြပါစေ| ရောက်ရှိလာကြပါစေကုန်သတည်း ‘ဟူ၍ (၅)ကြိမ် |(၅)ခါတိတိ ရွတ်ဆိုဆုတောင်းပေးရပါမည် ကဆုန်လပြည့်နေ့မှစ၍ ကံပွင့်ကံမြင့် … Read more
ဘုရားဖူးရင်း ထီထိုးရာမှ ဆွတ်ခူးသွားတဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် နေပြည်တော် လက်လုပ်တောင်တွင် ဘုရားလာဖူးရင်း ထီထိုးရာ ရန်ကုန်မှ ဘုရားဖူးမိသားစု သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူး… နေပြည်တော်၊ လက်လုပ်တောင်သာဝက၊ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်၏ တပည့်သာဝက ရန်ကုန်မြို့နေ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင်း မှ လက်လုပ်တောင်ဘုရားဖူးခဲ့ပြီး ကံစမ်းခဲ့သော ထီလက်မှတ်မှာ (၁၅)ကြိမ်မြောက် သိန်း (၁၅၀၀၀) ကံထူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင် ရွှေနန်းသွင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ မေတ္တာတန်ခိုးတော်များ ၊ အဓိဌာန်များပြည့်ဝရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများ၊ ဘုရားဒကာ၊ ဒယိကာမများနှင့်လည်း စည်းကားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ SKnet unicode နပွေညျတျော လကျလုပျတောငျတှငျ ဘုရားလာဖူးရငျး ထီထိုးရာ ရနျကုနျမှ ဘုရားဖူးမိသားစု သိနျးပေါငျးတဈသောငျးခှဲဆှတျခူး… နပွေညျတျော၊ လကျလုပျတောငျသာဝက၊ ဗောဓိရိပျငွိမျတောရဆရာတျော၏ တပညျ့သာဝက ရနျကုနျမွို့နေ ဦးအောငျနလေ+ … Read more
၁-၅-၂၀၂၀ ၁၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ဆုကြီး ကို ပဲခူးတိုင်း ကဝမြို့နယ်မှ မနီလာထွန်းက …. ည ၅၅၈၀၀၄ အက္ခရာ နံပါတ်ဖြင့် အောင်ဆုထူးပိုင် လေးထောင့်ကန် -ပင်ရင်း ဆိုင်မှ ဆွတ်ခူးရယူသွားပါကြောင်း…. Ko Maung Tun ၁၅ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ/ အဆုံး ◀️ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၅၀၀၀ စ ၄၄၁၇၉၈ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၀၀၀၀ ည ၅၅၈၀၀၄ ( ၁၅ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( … Read more
အခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက တချို့အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေထက် အရုပ်မနဲ့အတူနေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို မကြာခဏ တွေ့ဖူး မြင်ဖူးနေမှာပါ။ အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလည်း အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အရုပ်မနဲ့ လက်ထပ်ကာ အတူနေထိုင်ကြတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ထိုအမျိုးသားဟာ မယုံကြည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူနေမယ့်အစား အရုပ်မနဲ့ပဲ လက်ထပ်ကာ အတူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ထိုအရုပ်မကိုပဲ ပြုပြင်ပေးကာ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာကို အတူတူဖြတ်သန်းလျက်ရှိတာကို ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် Writer -LLA ( Shwe Yaung Lan ) Source-Real stories Unicode အခုဆိုရငျ ကမ်ဘာတဈဝှမျးက တခြို့အမြိုးသားတှဟော အမြိုးသမီးတှထေကျ အရုပျမနဲ့အတူနကွေတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကေို မကွာခဏ တှဖေူ့း မွငျဖူးနမှောပါ။ အခုတဈခေါကျတငျဆကျပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလညျး အမြိုးသားတဈဦးဟာ အရုပျမနဲ့ လကျထပျကာ အတူနထေိုငျကွတာကို … Read more
ရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်မှ ဘိလပ်ပြန် ခေါင်းလောင်းလေး နှင့် ကျိန်စာ သင့်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်
ရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်သို့ ဓာတ်လှေကားမှ တက်လျှင် တက်တက်ချင်း မှာပင်ရွှေရောင် ခေါင်းလောင်းလေး တစ်လုံးကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းလောင်းပေါ်၌ ရေးထားသော “ဘိလပ်ပြန်ခေါင်းလောင်း” ဟူသော စာကြောင့်ပိုစိတ်ဝင်စား ဖို့ကောင်းသည်။ ထိုသို့ရေးထားသော ထိုခေါင်းလောင်းလေး၏ မူလအကြောင်းအရင်းကို သိရှိသူနည်းပါးသည်။ ထိုခေါင်းလောင်းလေး၏ အကြောင်းအရင်းခံကား ဤသို့ဖြစ်သည်။ ၁၈၅၂-၅၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပုဂံမင်းနန်းချ၍ မင်းတုန်းမင်းက ထီးနန်းသိမ်းပိုက်သည့်အချိန်တွင် စစ်ကိုပြေငြိမ်းခဲ့ကြသည်။ စစ်ပြေငြိမ်းသော်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့မှာ စစ်နိုင်သူဖြစ်သည့်အလျှောက် မြန်မာနေရာဒေသ အသီးသီးမှ အဖိုးတန် ရတနာ ၊ ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများကို ထုံးစံအတိုင်း ယူငင်ကြလေသည်။ ပြည်မြို့မှ အင်္ဂလိပ်စစ်သားများက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂေါ်ဒဝင် အားခေါင်းလောင်းလေး တစ်လုံးကို ဆက်သကြသည်။ ထိုခေါင်းလောင်းလေးမှာ ပြည်မြို့ရွှေဆံတော် ဘုရားပေါ်မှ ယူငင်သွားသော ခေါင်းလောင်းလေးဖြစ်သည်။ ခေါင်းလောင်းလေး၏ ဘေးပတ်လည်တွင် … Read more
အသုံးပြုရန်မသင့်သော နှာခေါင်းစည်း(Mask) များအား FDA မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်
အသိပေးကြေညာခြင်း အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် နှာခေါင်း (Mask) များအား ဌာနသို့ဆေးပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ထောက်ခံချက်ထားခြင်း နှင့် စီစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းတို့မှ ကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ဖော်ပြပါပုံတွင် တရုတ်စာ များဖြင့်ဖော်ပြထားသော ဗူးခွံတွင် ပါရှိ နှာခေါင်း (Mask) များမှာ ကြိုးမျာပြုတ်ထွက်ခြင်း၊ ပြန်ကပ်ထားသောကော်ရာများတွေ့ရခြင်း ဗူးခွံတွင် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီအမည် နှင့် နိုင်ငံနှင့်ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များ ဖော်ပြထားမှု မရှိခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးတွေ့၇ှိ၇ပါသဖြင့် အလားတူ နှာခေါင်းစည်း အမျိုးအစားများကို သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အသုံးပြုရန်မသင့်ပါကြောင်း စီစစ်ဝယ်ယူရန် အသိပေးအပ်ပါသည် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဈေးကွက်င်္တင်း ရောင်းချလျှက်ရှိသော နှာခေါင်းစည်းများအား ၀ယ်ယူအသုံးပြုရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ၏ အမည်၊ နိုင်ငံ ထုတ်လုပ်သည့် ရက်စွဲတို့အား ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသော နှာခေါင်းစည်းများအား ၀ယ်ယူအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည် Unicode အသိပေးကွညောခွငျး အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာနသညျ … Read more